October 23, 2020 - Achawlaymyar
ရင်သားတွဲတာ ၊ နှစ်ဖက်မညီတာဟာ အိမ်ထောင်သည် ၊ ကလေးအမေတွေမှဖြစ်လေ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး ။ နေထိုင်စားသောက်ပုံမှားယွင်းမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒီလိုရင်သားတွဲကျမှုအတွက် ထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနဲ့အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် ။ ပထမဆုံးအိမ်တွင်း နည်းလမ်းကောင်းတွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လူသုံးများတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြပေးပါမယ်နော် ။ လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ တစ်မျိုးတည်းပါပဲ ။ အဲ့ဒါကတော့ သံလွင်ဆီစစ်စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပထမဦးစွာ အိပ်ရာပေါ်လှဲပြီး ကျောနောက်မှာ ခေါင်းအုံးခံထားလိုက်ပါ ။ ထို့နောက် သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်ကိုယူပြီး ရင်သားပေါ် ပွတ်လိုက်ပါ ။ ပြီးလျှင် ရင်သားကို စက်ဝိုင်းပံစံအတိုင်း နှိပ်နယ်ပေးရပါမယ် ။ နှိပ်တဲ့အခါ လက်နှစ်ဖက်စလုံးက ရင်သား တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ ရှိနေပြီး ပြိုင်နှိပ်ရမှာပါ ။ … Read more
အိမ်က မိန်းမ ကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား (၁) ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်
အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်မယ့် စာ (ဘာသာပြန်) အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်…ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ “မင်းကိုငါ ပြောစရာရှိတယ်”သူကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေပြီး ညစာစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်ကစပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာတွေ တွေးနေတယ် ဆိုတာကို သူ့ကိုပြောရမှာပါ။ကျွန်တော် သူ့ကို ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စပေါ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကျွန်တော်စပြောခဲ့တယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့ ကျွန်တော့်စကားလုံးတွေ ကို စိတ်ပျက်နေပုံမတွေ့ရဘူး။ ကျွန်တော့်ကို နူးညံ့စွာပဲ မေးခဲ့ပါတယ်။“ဘာကြောင့်လဲ” တဲ့။ သူ့မေးခွန်းကို မဖြေဘဲ စကားလွှဲလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ သူဒေါသထွက်သွားတယ်။ လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ တူတွေကို လွှင့်ပစ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုအော်တယ်။“နင်ယောက်ကျားမဟုတ်ဘူးလား” အဲဒီညက ကျွန်တော်တို့ စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။သူကတော့ ငိုပဲ ငိုနေခဲ့ပါတော့တယ်။ … Read more
တကျော့ပြန် ကြော်ငြာဘုရင်မ ထက်ထက်မိုးဦး ပြန်လည်အောင်မြင်လာရတဲ့အကြောင်းမှာ . .
တကျော့ပြန် ကြော်ငြာဘုရင်မ ထက်ထက်မိုးဦး ပြန်လည်အောင်မြင်လာရတဲ့အကြောင်းမှာ . . . ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ လိုက်ဖ် ကိုကြည့်ပြီး တချို့က စန်းထတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ ဘယ်အချက်တွေနဲ့ ပြောတာလဲ။ ၁။ ပရိသတ်ကို လေးစားတယ် – ထက်ထက်မိုးဦးဆိုတာ အရင်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် ၊ မသိသူမရှိတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ကြော်ငြာမင်းသမီး၊ ခုနောက်ပိုင်း ခြေနေအရ လိုက်ဖ် လွင့်ရောင်းရတဲ့အခါမှာလဲ လိုက်ဖ် ကြည့်တဲ့ ပရိသတ် အပေါ်မှာ လေး‌လေးစားစား ဆက်ဆံတယ်။ ၂။ မာနမရှိ – ငါ မင်းသမီးပဲ။ ငါ ရောင်းပေးတဲ့ လိုက်ဖ် တွေမှာ အရောင်း အများကြီးရတယ်။ ဝယ်ချင်ဝယ်၊ မဝယ်ချင်နေ … Read more
လူသိနည်းသော နိမိတ်များ ၁။ အိမ်ထဲ ဖားခုန်ဝင်မူ ငွေရအံ့။ ၂။ အိမ်ထဲ ပိတုန်းဝင်မူ ဧည့်သည်လာအံ့။ ၃။ အိမ်ထဲ ဓါးခုတ်ကောင်ဝင်မူ ပေးကမ်းမည့် ဧည့်သည်လာအံ့ ၄။ အလံတင်ရမူ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အံ့။ ၅။ တင်လိုက်သည့်အလံ ပြန်လျှောကျမူ ဘေးတွေ့အံ့။ ၆။ ခွေးလက်ဆောင်ရမူ၊ အိမ်တွင် ခွေးလာနေမူ မိတ်ဆွေကောင်းရအံ့။ ၇။ ခွေးမဲလာ‌မူ ဥစ္စာပေးမည့် မိတ်ဆွေရအံ့..= ၈။ ခွေးဝါလာမူ ပျော်ရွှင်စေမည့် မိတ်ဆွေရအံ့။ ၆။ ခွေးဖြူလာနေမူ ချစ်ခင်ဖွယ် မိတ်ဆွေရအံ့။ ၇။ ခရီးသွားစဉ် နွားနှင့်တိုးမူ အလုပ်ကိစ္စ အဆင်ပြေအံ့။ ၈။ အင်္ကျီ ပြောင်းပြန်ဝတ်မိမူ မထင်မှတ်ပဲ ငွေအမြောက်အမြား ရအံ့ ၉။ အိမ်တွင် ကြောင်မဲလာနေမူ မိတ်ဆွေသစ္စာဖောက်အံ့။ … Read more
“အ​မဘောဘဲဖွဈဖွဈ အ​မကေို့ပါ ရောဂါကူးခငျြ ကူးပါ​စေ​တော့ဆရာမ​တှကေို ​ပွောပွီးသမီး​လေးနဲ့အတူ အ​မေ​ဘေးမှာရှိ​နေ​ပေးမယျ​နျော”တဲ့
“အ​မဘောဘဲဖွဈဖွဈ အ​မကေို့ပါ ရောဂါကူးခငျြ ကူးပါ​စေ​တော့ဆရာမ​တှကေို ​ပွောပွီးသမီး​လေးနဲ့အတူ အ​မေ​ဘေးမှာရှိ​နေ​ပေးမယျ​နျော”တဲ့ မှတျမှတျရရ ၂၂.၁၀ .၂၀ရကျ​နေ့ ကိုဗဈ​ကွောငျ့ကြ​နော့ နှလုံးသားအရငျ့အမာကွီးကို မကျြရညျကြ​အောငျ ဖနျတီးလိုကျတဲ့ ​မမေ့ရနိုငျ​တော့မယျ့ ​ကွကှေဲစရာ​နေ့ တ​နဆေို့လညျးမမှားပါဘူး။ ယ်ခငျ အကွိမျ​တှလေိုဘဲ Quarantine က​နပေိုးမရှိတဲ့သူဆို ​ပြျောရှငျစှာအိမျပွနျကွပိုး​တှတေဲ့သူ​တှဆေို ဆကျလကျ​နပွေီး နောကျရကျမှာ ကုသ​ရေးစငျတာကိုသှားကွရတယျ။ ဒီ​နမှေ့ာ ဖွဈသှားတဲ့ဖွဈစဥျလေးပါ”အ​မေ! အ​ဖေ! သမီးတ​ယောကျထဲဒီမှာ ​နခေဲ့ရမှာလား ဟငျ” “​အေး​ပေါ့သမီး​လေးရယျ သမီးက ပို့​တှလေူ့နာဖွဈ​နေ​တော့ ​ဆေးကုသခံရမယျလေ သမီး​လေးရဲ့””ဟုတျလားဟငျ မရေီး​ဖရေီး​ပွောတာ” သမီး​လေး ​ဆေးကုသခံလိုကျ​နျောသမီးဘာ​ကွောကျစရာမဟုတျပါဘူး ကနျြးမာသှားရငျ အ​မကေိုယျတိုငျ လာ​ချေါမယျ​နျော သမီး​လေးရယျ တိတျ တိတျ” ဟငျ့အငျး ဟငျ့အငျး မလိုကျ ပါရ​စနေဲ့ မေ​မနေဲ့ ​ဖေ​ဖရေယျ ​နျော သမီး​ကွောကျတယျ ​နျော ဖရေီး” ​ကွကှေဲစရာ … Read more
ကိုဗဈ အရေးပျေါလူနာတှအေတှကျ သတငျးကောငျးပွောလာတဲ့ ဦးဇျောဇျော
ကိုဗဈ အရေးပျေါလူနာတှအေတှကျ သတငျးကောငျးပွောလာတဲ့ ဦးဇျောဇျော ဦးဇျောဇျောက ကတော့ ကိုဗဈတိုကျဖကျြရေး အတှကျ အစှမျးကုနျကွိုးစားနတောဘဲ ဖွဈပါတယျနျော။လိုအပျနတေဲ နရောတှကေိုလညျး အမွဲတမျးလှူဒါနျးနတောလဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈကွိမျမှာ ဦးဇျောဇျောက ကိုဗဈ လူနာတှေ အတှကျ သတငျးကောငျလေးကို ပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျနျော။ဦးဇျောဇျောကကိုဗဈ ၁၉ ကွောငျ့ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ လကျလှတျဆုံးရှုံးနရေတဲ့ အသကျတှကေို ကွိုးစားကယျတငျပေးနိုငျဖို့ ဆရာဝနျ၊ သူနာပွု၊ စတေနာ့ဝနျထမျးတှကေ နညေ့မနား ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ICU/HDU ကုတငျ(၅၀)ကို ထပျမံဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ဧရာဝတီစငျတာမှာ စုစုပေါငျး အရေးပျေါလူနာ (၁၂၅)ဦးအထိ အနီးကပျကွပျမတျ ကုသပေးနိုငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။လူ့အသကျတှကေို ကယျတငျဖို့အတှကျအခကျအခဲတှကွေားက အနဈနာခံ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြရှိကွတဲ့ ဆရာဝနျ၊ သူနာပွု၊စတေနာ့ဝနျထမျးမြား အားလုံးကို တနျဖိုးထားလေးစားစှာဖွငျ့ ဂုဏျပွုအပျပါသညျ ဆိုပွီးတော့ ပွောလာခဲတာဘဲဖွဈပါတယျနျော။ဦးဇျောဇျော သကျရှညျကနျြးမာပါစနေျော။Source;U Zaw Zaw Unicode…ကိုဗစ် … Read more
အနံ့ပြောကျသူတှအေတှကျ အနံ့ပွနျရမယျ့နညျးလမျးကောငျးလေးကို မြှဝပေေးလာတဲ့ ဖိုးခဈြ…..
အနံ့ပျောက်သူတွေအတွက် အနံ့ပြန်ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ဖိုးချစ်…. ဖိုးချစ်ကတော့ လတ်တလောတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အနံ့ပျောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူသိထားတဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကြက်သွန်နီဥကို အပေါ်ယံအခွံခွာကာ အလုံးလိုက်ဝါးပြီး အရည်ကိုပါမြိုချပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုးနှစ်ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ အနံ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး လူတချို့ကတော့ နောက်ရက်တွေကျရင် ဝမ်းနည်းနည်းသွားတတ်ပါတယ်တဲ့၊ ဒါပေမယ့် နုံးချိသွားခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ ပထမ အမွှေးရနံ့များရလာမှာဖြစ်ပြီး နောက်ရက်တွေမှာတော့ တခြားအနံ့တွေ ရလာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ် ငွေလည်းမကုန်၊ မပင်ပန်းဘဲ လွယ်ကူစွာလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အပြင် အနံ့ပျောက်သူ ဆယ်ဦးလောက် ဒီနည်းလမ်းလေးလုပ်ကြည့်တာ အကုန်အနံ့ပြန်ရလာကြတာမိုယုံကြည်စွာလုပ်နိုင်ကြောင်း ရေးသားမျှဝေခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးမျှဝေပေးတာက ကြိတ်ကုဖို့မဟုတ်ဘဲ တကယ်အနံ့ပျောက်တာနဲ့ကြုံလာရင် ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းတွေကို သွားပြကြဖို့၊ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ကြဖို့လည်း ထပ်ဆောင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ် ကြက်သွန်နီကတော့ တော်ရုံဖျားနာတာမျိုး၊အသက်ရှုကြပ်တာမျိုးစတာတွေအတွက် ရှေးအရင်အဆက်ဆက်ကတည်းက … Read more
တခါတလေတော့ စကားပြောရင် တဖက်လူ နားညီးအောင် ပြောတတ်တဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေအကြောင်း
သောကြာ သားသမီးလေး တွေကတော့ အရိုးသားဆုံး သူလေးတွေပါ… သူတို့ဟာ အရာရာကို အလေးအနက် ထားတတ်ကြတယ်.. အပျင်း မကြီးတတ်ဘူး… အစား မမက်ဘူး.. တခါတလေတော့ စကားပြောရင် တဖက်လူ နားညီးအောင် ပြောတတ်ကြတယ်.. မိသားစုအပေါ် အမြဲ အနစ်နာခံ တတ်တဲ့ သူတွေပါ….. သူတို့ဟာ ဘဝကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင်ရဲ ကြတယ်.. စိတ်တို လွယ်သလို စိတ်ပြေလည်း လွယ်တယ်…. ဒေါသမကြီးပေမဲ့ အငြိုးအတေး ကြီးတတ်ကြတယ်… တစ်ခုခုဆို ခံစား လွန်းတတ်တယ်.. မျက်ရည်လွယ်တယ်….. ကိုယ် ခံစားရတာတွေကို ဘယ်သူ့မှ ပြောမပြဘဲ တစ်ယောက်ထဲ ကျိတ်ခံစားတတ်တဲ့ သူမျိုး…. သိုသို သိပ်သိပ် နေတတ်ကြတယ်… လောဘမကြီးဘူး အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းဘူး…. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက… ကိုယ့်ကို … Read more